Knotice ယူပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူး | Martech Zone
Knotice ယူပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးသည်
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 3, 2008 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 23, 2009 Douglas Karr
In 2006, ငါ 2007 ခုနှစ်ဂရပ်ဖစ် user interface ကိုပေါင်းစည်းမှု၏နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းသည့်အခါငါအနည်းငယ်အချိန်မတန်မီခဲ့ကြပေမည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပင်မစီးပွါးရေးအရမသွားဘူး၊
ဘို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ငါက 'မိုက်ခရို' ဗျူဟာတွေပိုဟောခဲ့တယ် - အီးမေးလ်စျေးကွက်အပါအ ၀ င်။ ဥပမာ - ExactTarget သည်မကြာသေးမီကစီစဉ်ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကိုလွှတ်ပေးရန်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများကမူ၎င်းကိုနည်းနည်း ထပ်မံ၍ ယူဆောင်လာကြသည်။
ယခုတပတ်တွင်စီအီးအို၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဘရိုင်ယန်ဒီဂန်နှင့်စကားပြောခွင့်ရခဲ့သည် ထုံးစံအတိုင်း။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားတွေအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုတကယ်ဖန်တီးဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့ဖူးတယ်။ “ batch and blast” သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အီးမေးလ်ကိုအချိန်နှင့်အမျှပြင်ဆင်ခြင်းသည်ပြင်ဆင်ခြင်းထက်ဖြစ်သည်။ အလွန်အရေးကြီးသည်မှာကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို 'နေ့စွဲ' တွင်ထားရန်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိကိုလျစ်လျူရှုပြီးစာဖတ်သူများ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ Knotice သည်ကွာဟချက်ကိုပေါင်းစည်းရန်တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Knotice သည်အီးမေးလ်၊ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ စစ်တမ်းများနှင့်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုဖြတ်ပြီးပစ်မှတ်ထားဆက်သွယ်မှုများကိုဖြန့်ဝေသည် အားလုံး နတ်သမီးပုံပြင်။ 'ဒိုင်းနမိုက်နှင့်ငါးမျှား' မည့်အစား Knotice သည်မှန်ကန်သောငါးများကိုမှန်ကန်သောနေရာများတွင်စုစည်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Google ကိုကျွန်ုပ်၏သမီး Nikon D40 အတွက်မှန်ဘီလူးရှာဖွေပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်အဆုံးသတ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်ကျွန်ုပ်ဆိုက်အသုံးပြုရန်ရှာဖွေသည့်ဝေါဟာရများကိုပေးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အငြင်းပွားမှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တွင် Nikon D40 ရှိကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယခုသိလိမ့်မည်။
အခု - ငါ ပြန်လာ ပိုကောင်းတဲ့ - ဆိုဒ်အတွက်ဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်က ဆိုက်တွင်စာရင်းသွင်းထားခြင်း၊ Nikon D40 နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုယခုမှကျွန်ုပ်ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဓာတ်ပုံကိုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်မေးခွန်းအနည်းငယ်ဖြေဆိုနိုင်ပြီးအကြောင်းအရာကိုရှုခင်း၊ ပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်မိုက်ခရိုဓာတ်ပုံထုတ်ကုန်များ၊ စာအုပ်များနှင့်ဒီဗီဒီများသို့ပင် ပို၍ ပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။
ဒီနေရာကနေရှင်းလင်းချက်ပါပဲ သူတို့ရဲ့ Concentri ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ Knotice:
ကျွန်ုပ်တို့၏ Concentri ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်၊ မိုဘိုင်းနှင့်ဝဘ်လိုင်းများမှအလွန်သက်ဆိုင်သောအဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခြင်းအတွက်ရိုးရှင်း။ အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ Concentri နှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်ဒီဂျစ်တယ်သုံးစွဲသူများကိုအလွယ်တကူထိတွေ့နိုင်သည်၊ တသမတ်တည်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်မလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့သူက On-demand ပေးတဲ့အတွက်စျေးကွက်သမားတွေကသူတို့လိုအပ်တာအတွက်သာပေးကြတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ Knotice ဟာသူတို့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကနေအရာအားလုံးကို host လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့တွင်ခိုင်မာသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိပြီးသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာများကိုသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် div သို့မဟုတ် iframe မှတဆင့်ထည့်နိုင်သည်။ အစွမ်းထက်!
Knotice သည်ဤနေရာရှိအခြားသောကုမ္ပဏီများထက်များစွာဝေးကွာသည်။ များစွာသော web, analytics နှင့်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်သူတို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သူတို့၏သိသာထင်ရှားမှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်အလွန်အလုပ်များနေကြသည်၊ သူတို့သည်အမှန်တကယ်ပြissueနာကိုမေ့နေကြသည် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောရလဒ်များရရှိရန်ဤမတူကွဲပြားသောဖြေရှင်းချက်များအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးအချိန်၊
ငါ Knotice ထံမှပိုမိုကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်!
ကျွန်ုပ်သည် Cisco I-Pristal Final - ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါ
ဧပြီ 4, 2008 မှာ 11: 45 AM
Nikon D40 အတွက်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့မှန်ဘီလူးလိုချင်ပါသလား။ Sigma တွင် ၁၇-၃၅ မီလီမီတာf/ 17-35 ရှိပြီးသင်အမေဇုံမှဒေါ်လာ ၂၄၀ ဖြင့် Cameta မှရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်f/ 2.8 မှန်ဘီလူးပါ ၀ င်သည့် built-in lens focus motor နှင့် D4 သည် $ 240 အောက်တွင် autofocus အတွက်လိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတကယ်ပျော်သည်။
ဘေးဖယ်အနေနဲ့ငါ D40 နဲ့အဲဒီမှန်ဘီလူးတွေကိုဒီပုံတွေအများကြီးသုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ D40 နဲ့ငါ့ Sigma 17-35mmf/ 2.8-4 မှန်ဘီလူးတွေကဘာကြောင့်ပြတာလဲဆိုတာပြနေတာပဲ။ 🙂